कलियुगका कुरा: गाउसम्म विकास पुर्‍याउने हाम्रो लक्ष्य छ । राजधानी आउदा कसैलाई अप्ठेरो परे हाम्रो समितिले सहयोग गर्नेछ
गाउसम्म विकास पुर्‍याउने हाम्रो लक्ष्य छ । राजधानी आउदा कसैलाई अप्ठेरो परे हाम्रो समितिले सहयोग गर्नेछ ।
अध्यक्ष, नवलपरासी बुङ्दी काली विकास मञ्च काठमाडौं
१. तपाई तदर्थ समितिको अध्यक्ष हु“दै अहिले फेरी नवलपरासी बुङ्दी काली विकास मञ्च काठमाडौंको निर्वाचित अध्यक्ष बन्नुभएको छ । यस मञ्चको उदेश्य के हो -
- विशेष गरी मिथकरं, डेढगाउ“ र रकुवा तथा त्यस भेग वरिपरिबाट राजधानी आइ बसोबास गरेका बीच आपसी सद्भाव कायम गर्ने उदेश्यले यो मञ्च गठन भएको हो । यस्का साथै यो मञ्चले त्यस क्ष्ँेत्रको विकास निर्माणका लागि राजधानी र स्थानीय स्तरमा रहेका सरकारी र गैरसरकारी संस्था“सग समन्वय गरेर गाउ“को विकास पनि गर्नेछ ।
२. अहिलेसम्म मञ्चले के के काम गरेको छ त -
- गत भदौमा गाउ“मा बाढी पहिरो जा“दा त्यसबाट सबैभन्दा बढी पिडित परिवारलाई राहत उपलब्ध गराइएको थियो ।
- यस्तै सोही बेाल देशभर बाढी पहिरो पिडितलाई सहयोग होस् भनी कान्तिपुर पत्रिका मार्फ सरकारी राहत कोशमा रकम उपलब्ध गराइएको थियो ।
- गत वर्षो एस एल सी परीक्षामा रकुवा, मिथकुरं र डेढगाउ“बाट उतिर्ण ९६ विद्यार्थीलाई वधाई कार्यक्रम मार्फ पुरस्कार वितरण गरियो ।
- मञ्चको आर्थिक संकलनका लागि दशैंमा चिठ्ठा विक्री वितरण गरियो ।
- यस्तै गत पुसको अन्तिम साता डेढगाउमा दुइ दिने स्वास्थ्य शिविर संचालन गरियो ।
३. तपाईलाई अहिलेसम्म गरिएका कार्यक्रम मध्ये सबैभन्दा बढी सन्तुष्टि के मा मिलेको छ -
- शिक्षा नै सबैभन्दा महत्वपूण् कुरा भएका हुदा मलाई एस एल सी परीक्षामा उतिर्णलाई दिइएको बधाई कार्यक्रम उत्कृष्ठ लाग्यो । त्यस्का साथै स्वास्थ्य शिविर संचालनबाट पनि त्यस भेगका धेरै मानिसलाई फाइदा पुर्‍यायो ।
४. अबका दुइ बर्स सम्म तपाईको कार्यकालमा कस्ता कस्ता कार्यक्रम गर्ने योजना बनाउनुभएकेा छ -
- अहिलेसम्म हामी सानातिना कार्यक्रममा नै अल्झेका थियौं । अबको अवस्थामा एउटा गैरसरकारी संस्थाको रुपमा गाउ“ क्षेत्रका लागि केही वृहत कार्यक्रम ल्याउने हाम्रो सोच छ र यस्को जानकारी हामी पछि गराउ“दै जानेछौं ।
- यस अगाडि हाम्रो समितिका कतिपय सदस्यको सक्रियता कम थियो । अहिले निर्वाचित समिति बनेकाले यस्ले भविष्यमा थप सक्रियताका साथ गाउको समस्यालाई पहिचाहन गरी सहयोग गर्नेछ । यस भेगका कतिपय व्यक्तिहरु प्रतिष्ठित भए पनि उहाहरुबाट हामीले लिन सक्ने सहयोग समेत लिन सकेका छैनौं । त्यस्मा हामीले ध्यान दिनुपर्नेछ ।
५. वु“ङ्दी काली सेरोफेरोबाट स्वास्थ्य उपचार, गाउ“को विकासका लागि डेलिगेसन, अध्ययन र अन्य कामका लागि राजधानी आउनेहरु धेरै छन् । त्यस्ता व्यक्तिलाई आर्थिक सहित अन्य पक्षमा सहयोग आवश्यकता पनि परेको हुन्छ, यस्तो अवस्थामा तपाईहरुले कसरी सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ ।
- आवश्यक परेका र आपद विपतमा परेकालाई विगतमा पनि मञ्चले सहयोग गर्दै आएको छ । भविष्यमा पनि यस भेगबाट आउनेलाई कुनै समस्या परे हामी मञ्चमा सर्म्पर्क गर्न अनुरोध गर्दछौं र सकेसम्म सहयोग गर्नेछौं ।
६. यस्तो सस्था विगतमा पनि गठन भएका थिए, आउने हराउने भइरहे । अब चाही मञ्च सधै क्रियाशिल रहन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने -
- डेढगाउ, रकुवा र मिथुकरमबाट काठमाडौं आई बसेका व्यक्तिहरु भेटघाट गर्ने उदेश्यबाट यस्को सुरुवात भएको हो । अहिले सम्म पनि केही कार्यक्रम गरिसकेका छौं । सबैको सहयोग भएमा यस्ले पक्कै पनि उपलब्धी हासील गर्दै जानेछ ।